ONE Championship SPIRIT OF A WARRIOR ThaiTicketMajor
หน้าหลัก | กีฬา | ONE Championship SPIRIT OF A WARRIOR
Thuwunna Indoor Stadium, เมียนม่าร์
17:30 pm local time
ตั้งแต่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
5,200 / 1,300 / 650 / 260 บาท
Last chance flash sale: 50% discount on Cat2-4tickets. Get your tickets now!
Period: 23rd June, Saturday 0001hr to 24th June, Sunday2359hr.
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 18.30 ( local time)
ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีเข้าชมการแสดง
ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือ บันทึกภาพ
เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป ต้องซื้อบัตรเข้าชม
Yangon will see yet another night of the world’s most exciting martial arts action on 29 June with ONE: SPIRIT OF A WARRIOR.
ဇွန်လ၂၉ရက်နေ့၊ ညချမ်းအချိန်ခါသမယမှာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ကိုယ်လုံပညာသိုင်းပေါင်းစုံ ပြိုင်ပွဲ ONE: SPIRIT OF A WARRIOR ပွဲကြီးကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ကြည့်ရှူရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Headlining the massive event is ONE Middleweight & Light Heavyweight World Champion Aung La “The Burmese Python” N Sang, who will be defending his middleweight belt against his toughest challenger to date.
အဓိကပွဲစဉ်မှာ ONE ရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းနှင့် လိုက်ဝဲဗီးဝိတ်တန်း နှစ်ထပ်ကွမ်းချန်ပီယံ "မြန်မာ့စပါးအုံး" အောင်လအန်ဆိုင်းဟာ သူ့ရဲ့မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ချန်ပီယံခါးပတ်ကို သူယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ဖူးသမျှပြိုင်ဖက်တွေထဲမှာ အကြမ်းဆုံးပြိုင်ဖက်တဦးနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ် ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Vying for the Myanmar national hero’s belt is Japan’s Ken Hasegawa,aproven finisher who also holds the DEEP Megaton Championship.
မြန်မာ့သူရဲကောင်းရဲ့ ခါးပတ်ကို စိန်ခေါ်ထိုးသတ်မယ့်သူက ပြိုင်ဖက်ကို ခဏချင်းပွဲသိမ်းထိုးသတ်တတ်တဲ့ DEEP Megaton ချန်ပီယံ၊ ဂျပန်မှ ခန်ဟဆဲ့ဂါဝါဖြစ်ပါတယ်။
They will be accompanied on the card by the very best martial artists from Myanmar and the world, so get ready to see just why ONE Championship has been able to take the world by storm!
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကမ္ဘာမှ အကောင်းဆုံး ကိုယ်လုံသိုင်းပညာရှင်များရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်မှုများကိုပါ တဝကြီးကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်လို့ တကမ္ဘာလုံးက ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ အားပေးကြတဲ့ ONE Championship ပွဲကြီးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ အဆင်သင့်ပြင်ထားကြပါနော်။